ओली भन्छन्-'माधव नेपाल लाज पचेको मान्छे! मलाई बहुला कुुकरले टोकेको छ र?' - Dainik Online Dainik Online
ओली भन्छन्-‘माधव नेपाल लाज पचेको मान्छे! मलाई बहुला कुुकरले टोकेको छ र?’
प्रकाशित मिति : १४ असार २०७८, सोमबार २ : ५१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार राजधानिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव कुमार नेपाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पुच्छर भएको टिप्पणी गरे।
नेता नेपालले आफुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भनी जनता माझ झुटको राजनीति गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे।
उनले भने “प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिलाई राखेँ अरे । माधव नेपालले आफै भन्दै हिडेका छन् मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे तर म मान्दिनँ। म शेर बहादुर देउवा प्रति यति सर्मपित छु । म देशलाई, पार्टीलाई, जनतालाई धोका दिन्छु । पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु । शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु । उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै ज्वईन गर्न पनि सक्छन् । कार्यकर्ता भएर हिडेका छन् । प्रचण्डको पार्टी त उनलाई ज्वईन गर्नुनै छ । त्यो त उनको गन्तव्य नै हो । मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन् । तर धाक के लगाएर हिडेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन्। मलाई बहुलाहा कुकुरले टोकेको छ र? कोही काम नपाएर, कोही मान्छे नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला?”
कहिले अध्यक्ष त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ भनी आफै आफ्नो महत्व बढाएर नेता नेपालले झुटको राजनीति गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे।
नेता नेपालले कम्युनिष्ट विचार धारा, सिद्धान्त र निष्ठा छोडेर नेकपाका अध्यक्ष दाहालको पुच्छर भएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे।
उनले भने “यीनी एकढंगले भन्ने हो भने प्रचण्डको पुच्छर हुन् । जन्तु पुर्वतिर फर्कियो भने पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ , पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो (पुच्छर) पुर्वतिर हुन्छ । फर्किन्छ । पछाडि पछाडि संगै हुन्छ क्या त्यो । उनी यता जाउँ भने भने पछि पछि त्यतै लाग्छ । काग्रेसतिर जाउँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ । ”
उनले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नेता नेपालको चर्चा नाथुराम गोड्सेको रुपमा हुने गरेको टिप्पणी गरे।
उनले भने “माधव नेपाल भन्ने एकजना कांग्रेसका पछाडि कुद्ने मान्छे छन् । अहिले नेपालको राजनीतिमा सबैजसोले नै चिन्छन् प्रायः । किनभने असाध्यै चर्चा भईरहेको छ कि यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुन सक्दो रहेछ । आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने । कम्युनिष्ठ आन्दोलन सिध्याउने अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेताहुँ भनेर हिड्ने । यस्तो लाजशरम पचेको मान्छेको चर्चा सकारात्मक हिसावले मात्रै होइन नकारात्मक हिसाबले हुन्छ नि। गान्धीको मात्रै चर्चा हुदैन नाथुराम गोड्सेको पनि चर्चा हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विचार बोक्न भई स्वार्थ बोक्न लगाउने गरेको टिप्पणी गरे।
उनले भने “राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई कार्यकर्ताबाट जनमा परिणत गरिदिने। कार्यकर्ताहरुलाई विचार बोक्न लगाउने होइन स्वार्थ बोक्न लगाउने। स्वार्थको वितरण गर्ने। विचारको सम्प्रेषण होइन। स्वार्थको वितरण। र झुट र वेइमानीको सहारा लिने । केही मान्छेहरु अहिले हामीले देखिराखेका छौ। विचार हरायो । उद्देश्य हराए। देशलाई कहाँ पुराउने हो त्यो कुरो र्विसिए। सम्मृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उहाँहरु उच्चारण पनि गर्नुहुन्न । जनताको ध्यान त्यतातिर जान्छ, कार्यकर्ताको ध्यान त्यता जान्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत स्वार्थ, अंहकारहरु, महत्वकाक्षाहरु र कुण्ठाहरुको व्यापार चल्दैन।”